Soo -saarayaasha Xidhmada Hawlgalka OEM & ODM | Shiinaha OEM & ODM Warshadda Xidhmada Hawlgalka & Alaab -qeybiyeyaasha
Hawlgalka caafimaad ee isticmaalka mar keliya ee ilaalinta caafimaadka, kaas oo si wax ku ool ah uga fogaan kara caabuq labaad.
Xidhmada qalliinka madhalays ah ee la tuuro waa maado si weyn loogu isticmaalo qalliinka isbitaalka. wuxuu ka kooban yahay dalool weyn oo keli ah, hal qalliin, maro, goonnada qalliinka, shukumaan dalool, mid dhexe, galoofyo caag ah iwm oo si wax ku ool ah u hor istaagi kara dareeraha iyo gelitaanka bakteeriyada kana hortaga caabuqa iskutallaabta. Halabuurka gaarka ah ayaa la dooran karaa oo la habeyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha isticmaaleyaasha.
Ku kaydi meel nadiif ah, qalalan, hawo leh oo ka fog holaca furan.